Chibayo chinotapukira here? Ndiani ari panjodzi uye maitiro ekuzvidzivirira - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Kambani, Iyo Checkout Nharaunda, Wellness Kambani Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Nhau, Wellness Nhau Info Info, Nhau Nharaunda Zvinodhaka Vs. Shamwari Nharaunda, Kambani Hutano Dzidzo, Hutano Kambani, Hutano Dzidzo Checkout Zvinodhaka Info Zvipfuwo
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Chibayo chinotapukira here?
Chibayo chinotapukira here?
Pneumonia chirwere chinokanganisa mapapu. Kufema kunova kwakaomera munhu ane hutachiona nemabayo nekuti masaga emweya mumapapu, anozivikanwawo sekuti alveoli, anotanga kuzara nemvura. Pneumonia inogona kutyisidzira hupenyu. Vanenge vanhu zviuru makumi mashanu muUS vanofa nechirwere ichi gore rega rega, sekureva kwe Nzvimbo dzekudzivirira nekudzivirira hosha (CDC). Chero hutachiona hwekupemha hunogona kunge hune chekuita, kunyanya nekutyisidzira kuri kuuya kwecoronavirus. Asi mabayo anotapukira here? Verenga pamusoro kuti udzidze kuti ndiani ari panjodzi yekubatira mabayo uye maitiro ekuzvidzivirira kubva pakupararira.
Ndinoziva sei kuti ndine mabayo?
Zviratidzo zvepneumonia zvinogona kuuya mukati memaawa makumi maviri nemana mushure mehutachiona kana kuuya zvishoma nezvishoma. Zviratidzo zvakajairika zve pneumonia dzimwe nguva zvinoita kunge kutonhora- kana dzihwa-senge zviratidzo zvinosanganisira kukosora, fivha, uye kunetseka kufema.
Kukosora pachezvayo inogona kunyorova kana kubereka, zvichireva kuti unokosora yero, girinhi, kana kutota shava mamasi kubva mumapapu. Hemoptysis (kukosora ropa, maburi ane ropa, kana phlegm) uye kukosora usiku inogona zvakare kuitika panguva yekukanganiswa nemabayo.
Kupisa kwakanyanya , kumusoro kwemakumi mashanu emadhigirii, inogona kuve mhinduro kune muviri kurwisa hutachiona hunosangana nemabayo. Kana iwe uine feverish, unogona kusangana nechando, ziya, uye kuzunza.
Kunetseka kufema unganzwa sekufema kwekufema, kana kunzwa sekunge haugone kubata mweya wako. Marwadzo echifuva, anosanganisira anopinza kana ekubaya manzwiro paunenge uchikosora kana kuyedza kutora mweya wakadzika, zvakajairika kana pneumonia ichikura. Uyezve, cyanosis (yakaderera oxygen muropa) inogona kuitika, ichikonzera miromo yako, zvigunwe zvemunwe, kana ganda kuti riite bhuruu kubva mukushaikwa kweoksijeni.
Zvimwe zviratidzo zvemabayo zvinogona kusanganisira kurasikirwa nechido, manyoka, kuda kurutsa, uye kurutsa.
Kune zvikonzero zvinopfuura makumi matatu zvebayo. Furuwenza uye yekufema syncytial hutachiona (RSV) ndizvo zvinonyanya kukonzera mabayo muUnited States, sekureva kwe CDC . Hutachiona uye hutachiona mafomu emabayo anotapukira. Nekudaro, pneumonia inokonzerwa nekufemerwa kwemakemikari anogumbura, fungi, kana kushuvira pneumonia (inhaling chikafu kana mvura) haina kutapukira.
Mhando dzinotapukira dzemabayo dzinopfuudzwa kubva kumunhu kuenda kumunhu kuburikidza nezvidimbu zvemhepo. Kukosora uye kuhotsira mumhepo kunogona kusvibisa mumwe munhu. Zvakafanana nekupararira kweiyo inotonhora, dzihwa, uye COVID-19 , zvimedu zvemhepo zvinogona kumhara pamusoro uye zvisina kunangana nekukanganisa mumwe munhu. Kufamba mabayo ndeimwe nzira yekutsanangura nyumoniya inogona kunzwa kunge chipfuva kutonhora. Kana iwe uine hutachiona, kunyangwe iwe uri asymptomatic, iwe unogona achiri kuparadzira hutachiona kana hutachiona hunogona kukonzeresa mabayo.
Mamwe mabhakitiriya anopararira kupfuura mamwe. Mycobacterium uye mycoplasma zvinozivikanwa nekuti vanogona kupararira nyore sei. Streptococcus pneumoniae inokonzera kazhinji kacho yebhakitiriya pneumonia. Ichi chirwere chekufema chinotapukira uye chinogona kubata vanhu vakura uye vanhu vane vakaremara immune system.
Hutachiona hunogona kuwana nzira mumapapu uye hunokonzeresa hutachiona, kunyanya kune vanhu vari pamushonga wekufema, vanotambura nezvimwe zvirwere, kana kuchipatara. Chirwere-chinowanikwa mabayo chinoitika kana vanhu vatove vanorwara vachiwana mabayo pavanenge vachirapwa muchipatara.
RELATED: FDA inobvumira Xenleta kurapa hutachiona pneumonia
ndinogona here kutora maantibiotic nemaprobiotic panguva imwe chete
Viral pneumonia inotapukirawo. Fluenza kana dzihwa ndicho chikonzero chinowanzoitika chehutachiona pneumonia muvakuru. Nekudaro, yekufema syncytial hutachiona (RSV), coronaviruses (COVID-19 ingori imwe mhando yemazhinji coronaviruses), uye dzihwa rinotonhora rinogona zvakare kukonzera mabayo. Pamusoro pekuunganidzwa kwemvura mumapapu, zvinyama zvemapapu zvinotsva nekutsamwiswa neakawanda mabayo.
Ndiani ari panjodzi huru yemabayo?
Mhosva dzepneumonia dzinogona kuve dzakapfava kusvika pakukuvadza uye kunyange kutyisidzira hupenyu, zvinoenderana nemamiriro ako epanyama uye nemhando yemabayo yauinayo. Chero ani zvake - mudiki kana mukuru - anogona kuwana mamiriro ekufema aya. Aya mapoka anotevera ari panjodzi yekuumba mabayo.
Vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu zvichikwira
Varwere vane preexist yekufema chirwere, senge COPD kana asthma
Vanhu vane matambudziko ehutano, akadai sehosha yemoyo kana HIV / AIDS
Avo vane immune system isina kusimba, sevarwere vari kurapwa chemotherapy, kupora kubva pakuvhiyiwa, kutora zvinodhaka zvinodzivirira muviri, kana kufema pamhepo
Vanhu vane hutano husina kunaka
Vanhu vanosvuta kana kunwa doro rakawandisa
Nyanzvi yezvekurapa inogona kuongorora mabayo nekuongorora kwepanyama kana chipfuva X-ray uye tsanangura mishonga sezvazviri.
Muzhinji, vana vanowanzoita mabayo kupfuura vakuru. Pneumonia ndiyo honzeri yekutanga yekufa kwevana mudiki. Kunyangwe kufa kwevana pamitengo yemabayo kwakanyanya kushoma muAmerica nekuda kwehutano huripo, mabayo ndicho chikonzero chekutanga nei vana vari muchipatara muUnited States. Vana vane makore mashanu ekuberekwa uye vadiki vari panjodzi yakanyanya yemabayo kupfuura vana vakuru.
Pneumonia inopararira kwenguva yakareba sei?
Ivhareji yenguva iyo munhu anopararira kubva kumabayo ane mazuva gumi. Nekudaro, zvimwe zviitiko zvemabayo (kunyanya pneumonia inosangana netibhii) inogona kutapukira kwemavhiki akati wandei, zvichienderana nemhando yemabayo uye nemhando yekurapwa kunorumbidzwa.
Mishonga inorwisa mabhakitiriya inogona kudzikira zvakanyanya kutapukira kwehutachiona pneumonia. Mushure mekutanga mishonga inorwisa mabhakitiriya, munhu achiri kutapurirazve mamwe maawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana. Kamwe fivha inosanganisirwa nechirwere ichi yaenda, mabayo anogona kunge asingatapurirane. Kukosora kunogona kuenderera kwemavhiki akati wandei nekuda kwekurumidzira kuzvimba, kunyangwe mushure mekurapa kwakanaka.
Mishonga yekumba yakadai sekushandisa huchi kubvisa kukosora uye zinc kukurudzira immune system, kunyanya panguva yechiitiko chehutachiona pneumonia, inogona kuva maturusi anobatsira, sekureva Kate Tulenko , MD, muvambi uye CEO weCorvus Health.
Kuwana kurapwa kunogona kudzikisa nguva yekurwara uye njodzi yekuzviparadzira kune vamwe vanhu. Kana fivha yako ichidzoka kana kana zviratidzo zvinononoka zvikatadza kuenda, bvunza mupi wezvehutano kuti akupe mazano.
Nzira yekudzivirira mabayo
Mamwe mabayo anodzivirirwa. Majekiseni zviripo kudzivirira mabayo anokonzerwa nemamwe hutachiona uye hutachiona. Zvakare, kurarama hupenyu hune hutano nekudya kudya kwakaringana uye kugara uchirovedza muviri kunogona kudzikisa njodzi yekubatira mabayo. Kugara uchirovedza muviri kunogona kuwedzera hutano hwemapapu uye kuramba hutachiona.
Hupenyu hune hutano hunosanganisirawo kurega kusvuta uye kunwa doro rakawandisa kubatsira kuchengetedza immune system ine hutano. Kuwana zororo rakawanda uye kunwa mvura ndiyo imwezve nzira yekubatsira kudzivirira zvirwere zvakaita semabayo.
Kudzidzira kunyatsogeza mawoko kunogona zvakare kudzikisa kusangana kwako nehutachiona hunogona kukonzera mabayo, kunyanya panguva yekutonhora uye furuu mwaka. Ukakosora kana kuhotsira, ita nepaunogona napo kuzviita munyama unoraswa kana kugokora reruoko rwako, uchiteverwa nekugeza maoko. Ive neshuwa yekuisa hutachiona munzvimbo dzinowanzoshandiswa dzakadai semafoni, mapepa, uye zviguburi zvegedhi kudzivirira kupararira kwehutachiona hunogona kukonzera mabayo.
Chekupedzisira, kana vanhu munharaunda menyu vachirwara, ita zvese zvaunogona kuti udzidzise kusaungana kwevanhu pazvinogoneka. Kuderedza kutaridzika kwako kubhakitiriya nemavirusi paunenge uchirarama hupenyu hune hutano uye hunoshanda unogona kuita basa rakakosha mukuchengetedza hutano.
Enbrel vs Humira: Main Misiyano uye Kufanana
Maitiro ekudzorera kunharaunda panguva yezororo
ndinoziva sei kuronga b piritsi rakashanda
rini chirwere ichi chinopararira mushure mekutanga tamiflu
yako glucose level inofanirwa kunge iri chii
Yakawedzera kutenderera yekuzvarwa mapiritsi, akadai seasonale kana lybrel, akagadzirirwa kudzikisa chii?
unobvisa sei mbiriso mumuviri wako
chii chandingatora kutora kuti BP yangu idzike